END029 - Fakantsary fanaraha-maso OMG Pipeline - Lio 22mm, LCD 7-inch (20m / 30m / 40m / 50m) - Vahaolana OMG
FARANY029 - Fakan-tsarimihetsika OMG Pipeline Inspection manambatra ny fakana sary amin'ny fakantsary miaraka amin'ny monitor LCD 7 ″ mba hijerena ny faritra fanaraha-maso sarotra azo. Ny visur masoandro vita amin'ny hoditra deluxe dia manome fijerena mazava amin'ny fizahana ivelany sy fiarovana fanampiny ho an'ny monitor. Izy io dia miaraka amin'ny boaty feno padded izay mitahiry ny kitapo rehetra ho mora fitaterana sy fampiasana. Izy io dia manafoana ny filan'ny drywall mandriaka hahitana ny fivoahana ary manampy amin'ny famahana ny olan'ny fantsona. Izy io dia tsy maintsy ananana ho an'ny tompon-trano, ny mpiantoka ary na ny plumbera matihanina aza!
Style: Fakan-tsary BOX
function: FAHITANA AMIN'NY, Tano-drano / tsy atrehin'ny toetr'andro
Video famatrarana Format: H.264
Safidy fitahirizana data: SD Card
fampiharana: Ivelany, anatiny anatiny
Screen Size: Monitor 7 LCD
Haben'ny fakantsary / fitaovana: 42MM * 22MM / vy tsy misy fangarony
512hz: Natsangana tamin'ny mpandefa 512hz
Auto fifandanjana: Eny
dovia: AC100-240V DC12.6V
zoro fijerena fakan-tsary: 145 °
Savaivony tariby: 4.9mm
loharano fahazavana fakan-tsary: LED 12 PCS misy hazavana avoavo (azo ovaina)
Storage: Karatra SD 8G